Umzi mveliso we-100G Series | Kwichina 100G Series Abavelisi, abaXhasi
I-100Gb / s CFP 1310nm 10km DDM LAN-WDM EML i-transceiver ebonakalayo
Ii-transceivers ze-CFP ziyilelwe ukusetyenziswa kwiikhonkco ezili-100 zeGigabit Ethernet ngaphezulu kwe-10km ifomula enye yemodyuli, kwaye iyahambelana neCFP MSA Ukucaciswa kunye ne-IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Uxilongo lwedijithali luyafumaneka nge-MDIO. I-CFP LR4 iyahambelana nemfuno ye-RoHS.
I-100Gb / s CFP 850nm 100m DDM VCSEL i-transceiver ebonakalayo
Ii-transceivers ze-CFP ziyilelwe ukusetyenziswa kumakhonkco angama-100 eGigabit Ethernet kunye ne-10x11.2Gb / s iMultimode OTN. Ziyathobelana ne-CFP MSA Specification kunye ne-IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10. Uxilongo lwedijithali luyafumaneka nge-MDIO I-transceiver ebonakalayo iyahambelana nemfuno yeRoHS.
I-100Gb / s CFP2 1310nm 10km DDM LAN-WDM EML i-transceiver ebonakalayo
Ii-transceivers ze-CFP2 ziyilelwe ukusetyenziswa kumakhonkco angama-100 eGigabit Ethernet ngaphezulu kwe-10km ifomula enye yemodyuli, kwaye iyahambelana neCFP MSA CFP2 HW Ukucaciswa kunye ne-IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Ukuxilongwa kwedijithali kuyafumaneka nge-MDIO njengoko kuchaziwe kwi-CFP ye-MSA yoLawulo lweNkcazo yokujongana.